Wada sheekaysi fiidiyoow kooxeed: adeeggee dooranaysaa?
Dadku waxay jecel yihiin inay wada xidhiidhaan, laakiin ka waran haddii aad mayl u kala fogaatay dhex-dhexaadiyaha la doonayo?Natiijooyinka tijaabada ee shan adeeg oo wada sheekaysi fiidiyoow ah ayaa kaa caawin doona inaad abuurto naadiyada farsamada gacanta si aad ula sheekaysato asxaabta shabakada.Tayada iyo ku raaxaysiga adeegyada wada sheekaysiga fiidyowga waxaa saameeya arrimo badan, laga bilaabo xawaaraha la heli karo ilaa tayada webcams ka qaybgalayaasha.Laba desktop, laba laptops Windows iyo hal MacBook ayaa loo isticmaalay tijaabada.Kumbuyuutarrada waxaa lagu xiray Shabakadda iyadoo loo sii marayo Ethernet, Laptop-yada waxaa lagu xiray wireless-ka.Tijaabooyinku waxay ku xisaabtameen sida ay u fududahay in la rakibo oo loo isticmaalo adeeg gaar ah iyo haddii ay leeyihiin hawlo dheeraad ah.
RakibaaddaGoogle HangoutsSi aad u isticmaasho Google Hangouts, waxaad u baahan tahay koontada Google+Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad ku rakibto fur-in ku habboon browserka Windows XP iyo wixii ka sareeya, Mac OS X 10.5 iyo wixii ka sareeya, ama Linux.Sheekada fiidyaha waxa laga soo galay bogga Google+Dhinaca midig waxaad ka heli doontaa badhanka Wicista Fiidiyowga.Dhagsigeeda waxay marka hore ku geyn doontaa bog tijaabo ah halkaasoo Google uu ka hawlgelin doono kamaradaada iyo makarafoonkaaga.Marxaladdan, saaxiibbadaa midkoodna weli kuma arki karo.
Inta lagu jiro kulanka fiidiyowga, waxaad daawan kartaa fiidiyowyada YouTube
Bogga imtixaanku wuxuu leeyahay baloog aad ka dooran karto "goobo" (ama kooxo saaxiibo ah) kuwaas oo lagu ogeysiin doono wada-sheekeysiga fiidiyowga. Marka ay bilaabato sheekeysiga fiidyowga, isticmaale kasta oo lagu daro "goobaada" ayaa awoodi doona inuu arko oo, haddii la rabo, ku biir wada hadalka.Si aad u bilowdo sheekeysiga, dhagsii badhanka Ku biir oo aad qolka shirarka fiidiyowga. Waxaad ku martiqaadi kartaa isticmaalayaasha kale inay ka qaybqaataan wada hadalka adiga oo ku qoraya ciwaanadooda Gmail barta bidixda. Ilaa 10 qof ayaa ka qayb qaadan kara shirka fiidyaha
Fiidiyowga iyo tayadainta lagu jiro wada hadalka, afhayeenka ayaa lagu soo bandhigi doonaa daaqad weyn, iyo dhammaan ka qaybgalayaasha kale - daaqadaha yaryar ee hoose. Qaabka soo-bandhigiddani waxa uu u qaadanayaa isgaarsiin ilbaxnimo leh. Haddii laba qof ku hadlaan isku mar ku dhawaad ​​isku mug, Google Hangouts ayaa dooran doona mid ka mid ah oo kaliya, kaas oo lagu soo bandhigi doono bartamaha. Si kastaba ha noqotee, haddii doorashada Google aysan kugu habboonayn, waxaad si madaxbanaan u dooran kartaa ka qaybgalayaasha lagu soo bandhigi doono bartamaha daaqada.Sida tijaabadu muujisay, marka shir-fiidyowgu isu keeno in ka badan shan ka qaybgalayaal, muuqaalku wuu yarayn karaa, mararka qaarkoodna sawirku wuxuu noqdaa mid si daacad ah u hooseeya. Codka sidoo kale mararka qaarkood waa la qalloociyaa, laakiin guud ahaan tayada muuqaalka iyo codka labadaba waa mid aad u sarreeya.
Tilmaamo Dheeraadah Marka lagu daro baahinta muuqaalka, Google Hangouts wuxuu bixiyaa astaamo kale oo dhowr ah. Badhanka weyn ee ka hooseeya daaqadaha fiidiyowga ayaa kuu oggolaanaya inaad dirto fariin qoraal ah oo kooxeed. Laakiin daaqada wada sheekaysiga fiidiyowga ee ugu weyn, macluumaadka uu qof ka mid ah ka qaybgalayaashu soo diray fariin qoraal ah lama soo bandhigin. Isticmaalayaasha inteeda kale, iyagoo go'aankooda ah, riix badhanka "Chat" si ay u akhriyaan waraaqaha.Muuqaal muhiim ah ayaa ah awoodda lagu hawlgelinayo YouTube adoo isticmaalaya badhanka ku yaal aaladda hoose. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho muuqaal lagu soo bandhigi doono shaashadda guriga inta uu shirku socdo. Inta lagu jiro dib-u-ciyaarista fiidyaha, Hangouts si toos ah ayay makarafoonkaaga damin doontaa si aan codkaaga loogu sii dayn muuqaalka gadaasha. Laakiin haddii aad weli u baahan tahay inaad hadasho, badhanka riix to Talk ayaa kuu iman doona samatabbixin, kaas oo yarayn doona mugga muuqaalka oo daari doona makarafoonkaaga.
Shaqeyntamilkiilayaasha buug-yaraha waxaa lagula talinayaa inay u isticmaalaan xalkan shirarka fiidiyowga gaaban oo keliya, maadaama kuwa muddada dheer ay sababaan kulayl la dareemi karo ee kombuyuutarrada laptop-ka. Google Hangouts, dhanka kale, waa qalab aad u fiican oo loogu talagalay isgaarsiinta fiidyaha koox yar, laakiin si loo isticmaalo, qof kastaa waa inuu lahaadaa akoon Google ah.
Rakibaadda Bilaashka ah eeSkypeSi aad u sameyso shir fiidiyoow kooxeed gudaha Skype, waxaad u baahan tahay akoon Skype Premium ah oo leh lacag rukun ah $ 9 bishii (helitaanka qaddarka hal maalin waxaa lagu iibsan karaa $ 5).Samaynta shir fiidyow, milkiilaha akoontiga premium wuxuu ku biiri karaa isticmaalayaasha kale ee Skype, iyada oo aan loo eegin akoontada ay isticmaalayaan - lacag ama bilaash ah.Haddii qabanqaabiyaha shirku uu ka tago wada-sheekeysiga kooxda, fadhigu wuxuu ku dhammaanayaa dhammaan ka qaybgalayaasha.
Noocyada Skype ee bilaashka ah iyo kuwa la bixiyo labaduba waxay u baahan yihiin diiwaangelinta adeegga iyo ku rakibida codsiga macmiilka fiidyaha ee kombiyuutarka. Markaa, tani maaha doorashada ugu fiican haddii shirka fiidyowgu u baahan yahay in si degdeg ah loo abaabulo. Markaad gasho akoonkaaga, waxaad saaxiibada ka raadin kartaa Facebook, Gmail, Hotmail, ama naanaysta Skype. Skype Premium waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku xirto shir muuqaal ah ilaa 24 kaqeybgale. Si aad u dhaqaajiso wada sheekaysiga fiidyowga ah, waa inaad isticmaashaa nuqulkii ugu dambeeyay ee barnaamijka.
Fiidiyowga iyo tayadaguud ahaan, tayada muuqaalka iyo maqalka ee lagu gudbiyo Skype waxay mudan yihiin ammaanta ugu sareysa. Tayada gudbinta fiidyowga waxay la mid tahay tii ay muujisay Google Hangouts: badiyaa wanaagsan oo cad, oo leh dib u dhacyo yar. Mararka qaarkood qulqulka muuqaalku wuu yaraadaa oo dhibaatadu way korodhaa marka uu shirka muuqaalku sii socdo. Tayada codka ayaa waxoogaa ka wanaagsanayd Google. Ka qaybgalayaasha cusub ayaa lagu soo bandhigay shaashado yaryar, laakiin gujinaya shashada la rabo waxay soo dhawaysay ka qaybqaataha gaarka ah.Tayada kamaradda mareegaha ayaa aad uga muhiimsan Skype Premium marka loo eego Google Hangouts. Tijaabadu waxay adeegsatay laba kamaradood oo HD ah oo 720p ah oo ku xidhan kombuyuutarrada gacanta iyo MacBook oo ay ku dhex dhisan tahay iSight webcam. Kala duwanaanshaha xallinta Skype ee iSight iyo kan kamaradaha HD ayaa ahaa mid cajiib ah. Isku xirka seddexda kamaradood ee Google Hangouts ma samayn wax isbedel ah oo la taaban karo xagga tayada, inkastoo sawirka iSight uu noqday mid cad.
Tilmaamo Dheeraadah Skype waxay leedahay sifooyin dheeraad ah oo faa'iido leh oo lagu dhex dhisay adeegga fiidyaha kooxda. Ka qaybgalayaasha shirka Fiidiyowga waxay soo diri karaan fariimaha qoraalka ah ee wada sheekeysiga, taas oo lagu soo bandhigi doono daaqad gaar ah oo hoos timaada fiidiyowga. Marka mid ka mid ah ka qaybgalayaasha uu qoro fariin qoraal ah, ka qaybgalayaasha kale waxay arki doonaan goobaabin yar oo casaan ah oo ku yaal astaanta sheyga, taas oo muujinaysa in fariin cusub timid. Waxa kale oo suurtogal ah in farriimaha loo diro shir fiidiyoow kooxeed SMS, laakiin shaqadani waxay u baahan tahay lacag-bixin dheeraad ah.Intaa waxaa dheer, waxaad u diri kartaa faylasha (sawirrada, MP3) ka qaybgalayaasha kale ee shirarka Skype. Tan waxaa lagu sameeyaa daaqada ugu weyn, taas oo ah mid aad u habboon, maadaama aadan u baahnayn inaad furto browserka ama email macmiilka si aad ugu dirto faylasha koox.
ShaqeyntaShirarka Fiidiyowga ah ee Skype Premium waa la bixiyaa waxayna u baahan tahay software ka badan in lagu rakibo adeegyada kale.Tayada codku maaha ta ugu wanaagsan shanta adeeg ee la tijaabiyay, tayada muuqaalkuna kama roona adeega Google Hangouts ee bilaashka ah.
TinychatWaxay ku rakibtaaTinychat, adeeg ku-sheekeysi fiidiyoow ah oo browser-ku-saleysan.Xaaladdan oo kale, uma baahnid inaad wax ku rakibto - kaliya waxaad u baahan tahay inaad habayso qolka sheekaysigaada ama ku biir kuwa hadda jira.Adeegga Tinychat waa bilaash xayaysiisyada boorarka.
Haddi aad go'aansato in aad samaysato qolka lagu sheekeysto, Tinychat waxa ay kugu hagi doontaa dhawr daaqadood oo hoose si ay kaaga caawiyaan doorashada kamaradaada webka iyo makarafoonkaaga, waxa ayna kugu dhiiri galin doontaa in aad kala doorato makarafoon ama riix si aad u hadasho. Xaaladda dambe, makarafoonku wuxuu shaqayn doonaa oo keliya marka badhanka la hayo.Way fududahay in lagu martiqaado kuwa kale wada sheekaysiga fiidyowga ah. Si taas loo sameeyo, isticmaal badhanka Share ee ku yaal xagga sare ee daaqadda wada sheekaysiga. Tinychat waxay soo saari doontaa URL loo diri karo qof kasta. Waxaad ka geli kartaa kooxdaada Tinychat adigoo isticmaalaya Facebook, Twitter account ama qarsoodi ahaan marti ahaan. Martida cusubi waxay awood u yeelan doonaan inay arkaan wada sheekeysiga fiidyowga, laakiin si ay ugu daraan qulqulka fiidiyooga ee qolka sheekeysiga, waxay u baahan doonaan inay riixaan badhanka Bilawga baahinta.
Fiidiyowga interface iyo tayadaTinychat, waxaad abaabuli kartaa ilaa 12 baahin, laakiin tirada daawadayaasha waa mid aan xadidneyn.Tayada fiidiyowga ee Tinychat waa wanaagsan tahay, laakiin tayada maqalku waa liidataa.Dhawaaqa daba-dheeraada ayaa gaar ahaan aan fiicnayn.Codadka ayaa aad u qalloocan marka loo eego Hangouts iyo Skype.Waxaa jira hakad ku yimaada maqalka iyo muuqaalka dhowr ilbiriqsi, iyo sidoo kale dib u dhac ku yimaada qulqulka muuqaalka, ka dib browserka ayaa loo baahan yahay inuu dib u bilaabo.
Tilmaamo Dheeraadah Tilmaamaha ugu xiisaha badan ee Tinychat waa EtherPad Lite (waxaad ku bilaabi kartaa adigoo gujinaya warqad warqad ah oo ku hoos jirta daaqada fiidiyowga).Qeybtaan, ka qaybgale kasta oo ka tirsan shirka fiidiyowga wuxuu qaadan karaa qoraallo, taas oo sahlaysa in la wada shaqeeyo dukumentiyada.Waxaa intaa dheer, qoraalada mid ka mid ah ka qaybgalayaasha waxaa lagu soo bandhigi doonaa midab gaar ah.
WaxqabadkaWadahadallada dhaadheer, Tinychat aad ayay uga fog tahay doorashada ugu fiican.Laakiin waxay noqon kartaa xal wanaagsan haddii aad u baahan tahay inaad si degdeg ah dadka u soo ururiso shir muuqaal ah.Sidoo kale, adeeggani wuxuu ku habboon yahay shaqada iskaashiga ee mashaariicda u baahan qoraal ka badan hadalka.
RakibaaddaAIMAV Adeegga AV ee cusub ee AIM wuxuu ka tarjumayaa sida ay uga go'an tahay AOL inay ku sii jirto tartanka wershadaha shirarka fiidiyowga.Shirkaddu waxay samaysay hab fudud oo ku habboon oo lagula xidhiidho kooxo yaryar oo ilaa afar isticmaale ah.
AV video chat
Bilawga wada sheekeysiga waa mid aad u fudud: kaliya xaqiiji inaad ka weyn tahay 13 sano, AV wuxuu ku siin doonaa marin u helka wada hadalka. Intaa ka dib, nidaamku wuxuu soo saari doonaa URL u baahan in lala xidhiidho kuwa mustaqbalka. Isticmaalayaasha hore ee Mac waxaa laga yaabaa in lagu dhiirigeliyo inay rakibaan nooc Adobe Flash ah oo ku habboon Mac OS 10.6 ama ka sareeya. Inta soo hartay, waxay u badan tahay in mar hore la rakibay, markaa looma baahna in la soo dejiyo oo la rakibo software dheeraad ah. Intaa waxaa dheer, uma baahnid inaad iska diiwaan geliso adeegga oo aad siiso AIM macluumaadka shakhsiyeed.
Fiidiyowga interface iyo tayadaTijaabadayada AV, muuqaalku wuxuu sameeyay wax aad uga xun marka loo eego adeegyada kale.Fiidiyowgu inta badan wuu barafoobay, inkasta oo gudbinta maqalku ay ahayd mid aad u wanaagsan.Dib u soo kabashada adeeggu sidoo kale waxba ma bixin.Waxaa intaa dheer, ka dib markii dib loo soo celiyay qolka sheekeysiga, saddex kaqeybgale ayaa la helay, inkastoo laba kaliya ay ku lug lahaayeen tijaabada.
Sifooyin dheeri ahWaa kuwo dhexdhexaad ah - wada sheekeysiga qoraalka ah iyo kartida qaadista sawirada shirka fiidyaha.
TayadaAV ee shaqaynaysa kuma habboona waraysiyada xirfadlayaasha ah ama shirarka ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, AV waxay noqon kartaa xal fudud oo dareen leh oo lagula xiriiro koox yar oo ilaa afar qof ah, ama si deg deg ah loo abaabulo wicitaanada fiidiyoowga iyada oo aan la rakibin software dheeraad ah. Tusaale ahaan, waxa ay fududaynaysaa in lala xidhiidho qaraabada ama dadka aad taqaano ee aan culays ku ahayn aqoonta farsamada.
RakibaaddaAnyMeetingAdeegga bilaashka ah ee AnyMeeting wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku xidho ilaa lix qof isku mar wada sheekaysi fiidyow ah.Isla mar ahaantaana, ilaa 200 oo qof ayaa ka qayb qaadan kara kulanka fiidyaha daawade ahaan.Si aad u bilowdo sheekeysiga, hal isticmaale oo kaliya waa in uu ka diiwaan gashan yahay adeegga (sida caadiga ah qabanqaabiyaha sheekeysiga).Si aad u casuunto ka qaybgalayaasha, kaliya dhagsii Start Webinar, ka dib marka aad gujiso Start mikrofoonka iyo badhanka ku yaala Toolbar hoose, shirka fiidyaha ayaa bilaaban doona.
AnyMeeting video chat
Markii hore, AnyMeeting waxay soo bandhigi doontaa daaqada diyaarinta.Ka dib markaad siiso muuqaalkaaga taabashooyinka dhammaystirka, taabo badhanka diyaar baan ahay oo waxaad isku arki doontaa qolka shirarka fiidiyowga.
Interface-ka Fiidiyowga iyo TayadaAnyMeeting waa adeeg kale oo aan si fiican ugu shaqayn Mac-yada hore. Sida AV, waxay u baahan tahay Adobe Flash in lagu rakibo Mac OS 10.6 ama ka sareeya. Laakiin ciyaartu waxay u qalantaa shumaca: tayada iyo saxnaanta gudbinta fiidiyowgu maaha mid ka hooseeya kan ay bixiso Google Hangouts ama Skype. Tayada fiidyaha iyo gudbinta codku aad bay u wanaagsan tahay, iyada oo aan lahayn "macdan" xad-dhaaf ah iyo qallooc.
Tilmaamo Dheeraadah AnyMeeting waxay qani ku tahay sifooyin dheeri ah. Waxaad soo bandhigi kartaa shaashadaha bandhigyada, boostada macluumaadka shirka, ama waxaad isticmaali kartaa habka "kulan taleefoon" si kuwa aan hadda haysan kombuyuutar ay ula socdaan horumarka dhacdooyinka. Qabanqaabiyaha shirku wuxuu arki doonaa liiska ka-qaybgalayaasha, ka-qaybgalayaashuna waxay awood u yeelan doonaan inay ka doortaan astaanta niyaddayda ee ku habboon hab-dhaqankooda. Intaa waxaa dheer, wada sheekaysiga qoraalka, muqaalka iyo maqalka waa la damin karaa ama la heli karaa.
ShaqayntaSaaxiibada ama xidhiidhka qoyska, adeeggan aad buu u culaysiyey hawlihiisa, laakiin wuxuu ku fiican yahay shirarka ganacsiga iyo bandhigyada.Oo halkan faa'iidada ugu muhiimsan waa in kaliya qabanqaabiyaha shirka uu iska diiwaan geliyo.Inta kale ee ka qaybgalayaasha waxay galaan qolka lagu sheekeysto iyagoo si fudud u galaya ciwaanka emailka ah ee martiqaadka loogu soo diray.
Doorashada ugu fiicanHaddaba waa maxay adeegga ugu fiican?Waxaan u malaynaynaa in doorashadu ay ku xidhan tahay yoolalkaaga hadda.Google Hangouts iyo Skype waa labada adeeg ee ugu caansan uguna tayada badan.Waxay ugu fiican yihiin kooxaha yar yar, kuwaas oo dhamaantood leh xisaabaadka Google ama Skype.Hangouts gabi ahaanba waa bilaash, laakiin haddii tayada codku ay muhiim kuu tahay, Skype waa in la door bidaa.Tinychat ama AV ka AIM waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan haddii aad haysato waqti xaddidan oo aad si degdeg ah ugu baahan tahay inaad ku sheekeysato adigoon ku rakibin wax software ah marka hore. Xubnuhu waxay marin u heli doonaan iyagoo si fudud gujinaya URL-ka loo soo diray, marka lagu daro, labada adeegba waa bilaash. Tinychat waxay aad ugu habboon tahay kuwa aad u xiiseynaya inay ka wada shaqeeyaan dukumentiyada, halkii ay ka ahaan lahaayeen isgaarsiinta codka. Adeegga AV-na waxa uu door bidayaa in lala xidhiidho qaraabada iyo asxaabta, kuwaas oo aan xataa qasab ahayn in ay iska diiwaan galiyaan. Ugu dambeyntii, AnyMeeting waxay bixisaa madal aad u fiican oo loogu talagalay shirarka ganacsiga waaweyn, maadaama ilaa 200 oo qof ay arki karaan bandhig muuqaal ah isku mar. Waxaa intaa dheer, kaliya qabanqaabiyaha shirka waa inuu iska diiwaan geliyo bixiyaha adeegga. Tilmaamo dheeri ah ayaa sii kordhinaya fursadaha ganacsiga,laakiin waxay si cad u noqon doontaa mid xad dhaaf ah markaad la xiriirto asxaabta ama qoyska.
Waa maxay chat-ka fiidyowga ah?
Maadaama uu qofku yahay qof bulsho, isgaarsiintu waxay ka ciyaartaa door muhiim ah noloshiisa.Waqti ka waqti, xitaa qofka aadka loo ilaaliyo wuxuu u baahan yahay inuu qof la hadlo.Intaa waxaa dheer, iyada oo aan la helin wadahadal wax ku ool ah oo tayo sare leh, suurtagal maaha in la xalliyo wax kasta oo shaqo iyo ganacsi ah.
Qarniyo badan, dadku waxay si firfircoon ula kulmayaan asxaabtooda iyo kuwa ay yaqaaniin si ay ula xiriiraan, iyo sidoo kale xalliyaan dhammaan arrimahooda habka isgaarsiinta.Laakiin xaqiiqada casriga ahi waa sidaas oo ay inta badan aad noogu adag tahay in aan helno waqti aan ballan ku qabsanno, oo aan ka soo muuqanno oo aan uga hadalno mowduuc gaar ah cidda aan xiisayneyno.
Nasiib wanaag, ka dib markii uu Internetku si adag oo dhab ah u soo galay nolol maalmeedkeena, inta badan isgaadhsiintayadu waxa ay u guurtay xaqiiqada dhabta ah.Waxaan la xiriirnaa asxaabta shabakadaha bulshada, waxaan u dirnaa iimaylo shuraakadayada iyo asxaabtayada.
Dhowaan waxaa soo ifbaxday suurtagalnimo cusub oo lagu wada xiriiro dhanka Internetka, taas oo ay heli karaan qof kasta oo haysta webcam-ka oo ku xiran Internet xawaarihiisu sareeyo oo caadi ah oo aan xadidneyn gaadiidka.
Wicista fiidyaha ee khadka tooska ah waxaa hadda bixiya goobo badan oo ku yaal Shabakadda.Waxa kaliya ee u hadha isticmaaluhu waa inuu sameeyo doorasho uu ku door bido mid iyaga ka mid ah.Waxa xusid mudan, tusaale ahaan, adeegga wada sheekaysiga fiidyaha ee khadka internetka http://pentavideo.ru.
Kheyraadka ayaa leh interface ku habboon oo dareen leh, ka sokow, gabi ahaanba waa bilaash, taas oo aad muhiim ugu ah isticmaaleyaasha badankood.
Sheekada fiidiyaha ee khadka tooska ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad wada hadal la sameyso interlocutor kaliya maahan, laakiin sidoo kale inaad wada hadal la sameyso tiro badan oo dad ah hal mar qaabka shirka.Waad ku mahadsan tahay qaabka dambe, shirkado badan ayaa adeegsada wada sheekaysiga fiidyowga ah si ay kulamo ula qaataan xafiisyadooda fogfog iyo qaybahooda.
Sida magacaba ka muuqata, sheekeysiga muqaalka waa awooda lagu qabanayo wada hadalka qaab muuqaal ah.Si kale haddii loo dhigo, kaliya ma maqlaysid qofka ku hadlaya, laakiin sidoo kale waxaad ku arkaysaa kamarad muuqaal ah.
Baahida sare ee wada sheekeysiga fiidiyowga ee internetka guud ahaan, iyo adeegga http://pentavideo.ru gaar ahaan, ayaa inta badan sabab u ah xaqiiqda ah in isgaarsiinta fiidiyowga ee internetka ay bixiso fursado weyn oo lagu muujinayo dareenka.Waa hagaag, gaar ahaan isgaarsiinta firfircoon ma dhaawici doonto farahaaga, maadaama ay inta badan dhacdo haddii wadahadalku ku jiro habka waraaqaha.
Laakiin isgaadhsiinta fiidiyooga internetka ayaa sii kordhaya oo caan ka ah maaha saaxiibtinimo, laakiin isgaarsiinta ganacsiga.Waxaa intaa dheer, waa mid aad u habboon.Marka, tusaale ahaan, maamulaha safar shaqo ama fasax ku jira wuxuu si fudud u xakameyn karaa shaqada ururkiisa.Haa, iyo kuwa hoos yimaada, haddii loo baahdo, waxay fursad u leeyihiin inay kala tashadaan isaga arrin kasta oo muhiim ah.
Haddii aan soo koobno ​​dhammaan faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee isticmaalka fiidiyowga fiidiyowga, markaa, marka hore, qodobbada muhiimka ah ee soo socda waa in la ogaadaa:
- suurtagalnimada go'aan-qaadasho degdeg ah;
- koror weyn oo wax soo saarka shaqada;
- suurtogalnimada helitaanka caawimada khabiir;
- badbaadinta ilaha dhaqaalaha;
Haddi aanad waligaa isticmaalin qaabka isgaadhsiinta khadka tooska ah ee kamarada muqaalka ka hor, waxa aanu si xoogan kuugula talinaynaa in aad isku daydo.Waxaa hubaal ah inaadan niyad jabin doonin.
Vesti.net: Kooxda Microsoft ee wada sheekaysiga fiidyowga ah ayaa ka qaybgalayaasha gelin doona hal boos oo macmal ah
Microsoft ayaa ku dhawaaqday cusboonaysiin weyn oo ku saabsan adeeggeeda shirarka fiidiyowga ee Kooxaha.Mid ka mid ah hal-abuurka ugu muhiimsan ayaa ahaa soo bandhigida qaabka cusub ee Wadajirka ah - waxaa la soo saaray bilowgii hore ee cudurka faafa ee coronavirus gaar ahaan kuwa ka shaqeeya oo wax ku barta meel fog.
Habkani waxa uu abuuraa dareen ah in dhammaan ka qaybgalayaasha shirku ay ku jiraan qol isku mid ah oo dhijitaalka ah.Tignoolajiyada qaybinta ku salaysan AI waxay u dhaqaajisaa avatar ka qaybqaataha asalka guud.Waxay u ekaan kartaa, tusaale ahaan, sida fasalka oo kale, halkaas oo 49 qof ay hal mar ku kulmi karaan.Miisaska wareegsan iyo aqoon-is-weydaarsiyada, meelo kale ayaa sidoo kale la bixiyaa.
Qaabka Wadajirka ah hadda waxa uu ku jiraa beta shirkadduna waxa ay ballan qaadaysaa in ay u sii dayn doonto dhammaan isticmaalayaasha kooxaha bisha Ogosto.Shaandhaynta fiidyowga ayaa sidoo kale laga heli doonaa kooxaha.Qolka horudhaca, isticmaaluhu wuxuu dooran karaa shaandhada si uu u hagaajiyo heerka iftiinka oo uu u jilciyo diiradda kamaradda ka hor inta uusan ku biirin kulanka.Waxaad tusaale ahaan, dooran kartaa in aad dhabarka dambe ka leexiso.
Cusbooneysiin kale waa Muuqaalka Dynamic.Sida Microsoft sheegtay, waxaa suurtagal noqotay in la muujiyo agabka wada shaqaynta iyo ka qaybgalayaasha shirka laftooda isla shaashad isku mid ah.Gelitaanka fariimaha wada sheekaysiga waa la cusboonaysiiyayDhammaan fariimahan la diro inta lagu guda jiro shirka Kooxaha Microsoft waxay ka soo muuqan doonaan shaashadaha qof kasta iyada oo aan loo baahnayn in la furo guddiga wada sheekaysiga si gaar ah.
Iyo hal cusub oo kale - qoraal hoosaadyo leh tarjumaad.Ka qaybgalayaashu waxay heli doonaan adeeg ka turjumaya hadalka luqadaha kale wakhtiga dhabta ah.Haddaba, sidaas darteed, shirarku waxay u oggolaanayaan dadka aan isku luqadda ku hadlin inay wada xiriiraan midba midka kale.Dabayaaqada sanadkan, Microsoft waxa ay ballan qaadaysaa in ay ku dari doonto qoraallada qoraallada shirarka, kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad duubto waxa la sheegay.Kulanka ka dib, faylka qoraalka oo buuxa ayaa si toos ah loogu kaydin doonaa tabka wada sheekaysiga ee kulankaas.
Microsoft ayaa sheegtay in kooxuhu ay dhawaan awoodi doonaan inay taageeraan ilaa 1,000 ka qaybgalayaasha kulanka, iyo sidoo kale ilaa 20,000 oo qof marka ay timaado daawashada bandhigyada ama doodaha.App-ka mobaylka, shirkadu waxay ballan qaadaysaa inay u keenayso taageero kaaliyaha dhijitaalka ah ee Cortana.Waxay kaa caawin doontaa inaad samayso wicitaano xidhiidh la'aan ah qof gaar ah, ku xidhi isticmaalaha kulan la qorsheeyay, fariimaha farriimaha u dir, iyo sidoo kale faylasha lagama maarmaanka ah ee wada sheekeysiga shirka.
Ku cusub Jivo: wada sheekaysi muuqaal ah, xisaabaadka akoonnada iyo bixiyeyaasha cusub ee chatbots
Waxaan diyaarinay dhowr cusub oo faa'iido leh oo fududeynaya shaqada Jivo oo gacan ka geysan doona kordhinta iibka.
La shaqee macaamiisha adigoo isticmaalaya sheekeysiga muuqaalka
Si wada jir ah VideoForce, waxaan diyaarinay xal kuu ogolaanaya inaad ka soo baxdo tartanka - hadda waxaad la shaqayn kartaa macaamiisha goobta via isgaarsiinta video, sida ay u dhacdo shakhsi ahaan.
Adeegso code- ka xayaysiis eeVF2022ilaa 03/01/2022 oo hel 30 maalmood oo bilaash ah si aad u hesho hawlaha buuxa ee VideoForce.
Ku taxliilin tirakoobka qaybta "Xaalada Koontada".
Hadda qaybta "Xaalada Koontada" waxaad ururin kartaa oo is barbardhigi kartaa xogta wakhti kasta.Halkan waxa kale oo aad ku arki kartaa macluumaadka ku saabsan wada-hadallada iyo wicitaannada filtarrada habaysan.
Falanqee tirakoobka oo go'aanso sida loo hagaajiyo tilmaamayaashan.
Ku xidh chatbots iyada oo loo marayo bixiyeyaasha cusub
Waxaan sii wadeynaa inaan ballaarino liiska la-hawlgalayaasha taas oo aad ku abuuri karto chatbot kuu gaar ah.Markan waxaan aasaasnay ​​la-qabsiga adeegyada Dahi.ai iyo Metabot.
chatbot-ku wuxuu kaa caawin karaa dhimista culayska taageerada iyo kordhinta iibka.Caawinta adeegyada Dahi.ai iyo Metabot, waxaad si madaxbanaan u habeyn kartaa bot-ka, ku dari kartaa adiga ama isticmaal qoraallo diyaarsan, oo waxaad ku xidhi kartaa Jivo.
Faa'iidooyinka Metabot- Dhisme ku salaysan qoraalka iyo aqoonsiga hadalka labadaba (NLU with Dialogflow)
-Dhissan database ururinta su'aalo-ururinta iyo sahanka
- Guryaha macmiilka ee horumarsan, calaamadaynta tooska ah iyo meelaynta cabbirka
- Waxa kiciya dib u dhaca ku bilawga qoraalada iyo abuurista autofunnels
- Aaladaha is dhexgalka ee API dibadeed
- Dukaan lagu dhex dhisay bot-ka
- Ku-dhismay luqadda qoraalka
- Ku rakibida daruuraha ama server-yada
Qiimaha: bilaash ah (ilaa 100 isticmaale bishii), laga bilaabo 1000 rubles bishii isticmaale kasta oo cusub
Faa'iidooyinka Dahi- Loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah
- Interface Ingiriisi iyo Turkish.Ruushku waxa lagu taageeraa wada-hadallada bot.
Wargeysyada Vedomosti - ku hel wararka ganacsiga ugu muhiimsan boostada
Go'aanka Adeegga Federaalka ee Kormeerka Isgaarsiinta, Tignoolajiyada Macluumaadka iyo Warbaahinta Dadweynaha (Roskomnadzor) ee Noofembar 27, 2022 EL No. FS 77-79546
Aasaasaha: JSC "Warbaahinta Ganacsiga"
Oo ku saabsan.Tafatiraha guud: Kazmina Irina Sergeevna
Xayeysiisyada iyo macluumaadka dheeriga ah ee wargeyska Vedomosti.Ka diiwaan gashan Adeegga Federaalka ee Kormeerka Isgaarsiinta, Tignoolajiyada Macluumaadka iyo Warbaahinta Dadweynaha (Roskomnadzor) ee hoos yimaada lambarka PI No. FS 77 - 77720 ee ku taariikhaysan Janaayo 17, 2022.
Isticmaal kasta oo agab ah ayaa loo ogol yahay oo kaliya iyadoo la raacayo xeerarka dib-u-daabacaadda iyo joogitaanka hyperlink ee vedomosti.ru
Wararka, falanqaynta, saadaasha iyo agabka kale ee lagu soo bandhigay goobtan kama dhigna soo jeedin ama talo ah in la iibsado ama la iibiyo wax hanti ah.
Goobtu waxay isticmaashaa ciwaanka IP-ga, cookies iyo xogta juqraafiyeed ee Isticmaalayaasha Goobta, shuruudaha isticmaalka waxa ay ku jiraan Siyaasadda Qarsoonnimada
Xuquuqda oo dhan way xifdisan tahay © Business News Media JSC, 1999—2022
Bangiga Aasiya-Pacific wuxuu ku martiqaadayaa wada sheekeysiga fiidiyowga "saameynta masiibada ku leedahay saamiyada caalamiga ah iyo suuqyada sarifka lacagaha qalaad" ee Telegramka Diseembar 17 saacada 12:00
Labadii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray isbedel caalami ah oo ku yimid suuqyada saamiyada.Faafida ayaa weli saameynaysa siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka.Sidee bay bulshada dhaqaaluhu uga jawaabayaan dhibaatada coronavirus?Waa maxay fursadaha horumarinta dhacdooyinka?Maxaa u kaydsan lacagaha adduunka?
Diseembar 17, markay tahay 12:00 wakhtiga Moscow, kanaalka Telegram ee Bangiga Aasiya-Pacific t.me/atb_su wuxuu martigelin doonaa webinar fiidiyow ah oo lagu sheekeysto mowduuca "Saameynta masiibada ee saamiyada caalamiga ah iyo suuqyada sarrifka lacagaha."
Vladimir Burdenko, Madaxa Agaasinka Bangiga Maalgelinta ee Bangiga Aasiya-Pacific, wuxuu ka hadli doonaa sida dhaqaalaha adduunku u dhaqmay intii lagu jiray masiibada COVID-19, oo ku saabsan falcelinta mas'uuliyiinta lacagta ee baahida loo qabo in lala qabsado xaaladaha cusub iyo waxa ku saabsan. isbeddelka suuqyada maaliyadeed ee mustaqbalka dhow ...
Sheeko fiidiyoow Ruush ah, bilaash ah
Iyada oo leh dhammaan noocyada dadka.Baahinta internetka waxaa loo habeeyey qaab ay sahlan tahay oo ay ku faraxsan tahay in la sameeyo.Waad ku xidhmaysaa oo isla markiiba waxaad tagtaa interlocutor.Haddii aad ka heshay - waad is baranaysaan, haddii aanad jeclayn - waxaad riixdaa badhanka oo aad waji cusub ku leedahay.
Sheeko farxad leh, xamaasad aan xidhnayn, doodo filimaan cusub iyo isbeddellada moodada, iyo mararka qaarkood sheeko saqda dhexe dheer "nolosha".Guud ahaan, niyad kasta oo aad maanta leedahay, hubaal waxaad ku qabsan doontaa mawjadaada halkan.
Waxaan nahay saaxiibo :)
Haa, way nagu dhacdaa.Iyo marar badan.Waxaad arkaysaa, isgaadhsiinta internetka ayaa aad uga daacad badan marka loo eego nolosha dhabta ah.Halkan waxaad noqon kartaa naftaada oo aanad la qabsan qofna.Taas macnaheedu waa in ay fududahay in la garto qofka ruuxa kuugu dhow.
Yaa nala jooga?
Waxaad ku habeyn kartaa raadintaada midabka timaha, cabbirka naaska iyo xirfadda karinta borscht.Fiican, fiican.Waanu kaftan jirnay) Laakiin hablahayagu runtii aad bay u fiican yihiin.Is raadso, tani waa sheeko VIDEO ah.
Way kala duwan yihiin.Brunettes, blondes, madax guduudan.Ciyaartoyga, fannaaniinta, stylists.Qareeno, barnaamijyo, ciidan.Ganacsatada, maareeyayaasha iyo shaqaalaha.Waan ka xunahay, ma jiraan amiirro faras cad saaran.Laakiin waanu eegaynaa :)
Dhab ahaantii, muuqaalkan oo kale ayaa mararka qaarkood soo baxa!Waxay ciyaaraan gitaarka, heeso ayay qaadaan oo waxay qabtaan sanduuqyada garaaca.Ha xishoon sidoo kale.Caalamka tus hibadaada.Yaa og, laga yaabee in soo saarayaashu ay sidoo kale halkan ku dheggan yihiin)
Halkan waxaan ku xusnaa maalmaha dhalashada oo aan abaabulno "xaflad mawduucyo" iyo xitaa xididka kooxda kubbadda cagta ee ay jecel yihiin si wadajir ah.Nagu soo biir!Ka dib oo dhan, madadaalada ayaa aad uga xiiso badan shirkad weyn.
Waxay rabaan inay kula kulmaan!U qor sida ugu dhakhsaha badan!
Waxa aanu u samaynay muuqaalkan chat-ka ah si dadka aduunka oo dhan ay u kulmaan oo ay wakhti fiican u qaataan.Muhiimadayadayadu waa ixtiraamka labada ka qaybgalayaasha wada sheekaysiga.Waxa ay meesha ka saaraysaa fikradaha sida aflagaadada, aflagaadada, aflagaadada iyo bahdilaadda sharafta aadanaha.Waxaas oo dhan waxaa lagu caddeeyey xeerarka isticmaalka kheyraadkayaga.Fadlan si taxadar leh u akhri ka hor inta aanad bilaabin baahintaada ugu horeysa.
S: Wada sheekaysiga fiidyowga ah ma kaliya da 'kasta?
J: Ma aha oo kaliya dadka waaweyn inay la xidhiidhaan halkan, laakiin carruurta si adag ayaa looga mamnuucay inay ku lug yeeshaan wadahadalka.
S: Kaliya isgaarsiin asluub ​​leh!
J: Fadlan si edeb leh oo tixgalin u yeelo wada sheekeysigayaga fiidiyowga!Iyaguna way kula joogi doonaan!
S: Miyaynu nahay xidhiidh asluub ​​leh oo wacan?
J: Lama aqbalayo in aad edeb daran tahay oo halkan wax lagu xalliyo.Intaa waxaa dheer, in la isticmaalo luqad xun.Luuqad kasta oo fisqi ah waa mamnuuc.Ixtiraam naftaada iyo dadka kaleba.
S: Xag-jiriinta, argagixisada iyo kuwa kale ee xagjirka ah - ma kaynta!?
J: Waxa aanu la xidhiidhnaa dad ka soo kala jeeda jinsiyado, isir iyo diin.Oo, si yaab leh, waxay dhexdooda ka helaan af ay wadaagaan.Sidaa darteed, haddii qof uu ku dhibo, kaliya u beddel mid kale.
S: Waxa mamnuuc ah in dadka kale sawiradooda, muuqaaladooda iyo macluumaadka lagala xidhiidho lagu baahiyo chatka?
J: Ma soo dhejin kartid macluumaadka sirta ah ee qolo saddexaad dadweynaha.Xayiraaddan waxa la qaadayaa oo keliya haddii aad marqaati ka noqoto nooc dembi ah.
S: Video chat-ka miyaanu ahayn meel lagu xayaysiiyo?
J: Ku bixi alaabtaada iyo adeegyadaada agabka go'an.Jid ahaan, sidoo kale waa mamnuuc in la xayaysiiyo goobo kale.
Sheekadayada fiidiyowga ah, waxaad la xiriiri kartaa diiwaangalin la'aan, laakiin tani macnaheedu maaha inaanan awoodi doonin inaan la socono dembiilayaasha iyo dembiilayaasha.Goobta, waxaan xaq u leenahay inaan si toos ah u duubno dhammaan baahinta isticmaalaha, sidaas darteed, haddii loo baahdo, ma adkaan doonto in la helo oo la ciqaabo dembiilaha.Weli su'aalo ma qabtaa?Ma haysaa wax talobixin ah oo lagu hagaajinayo shaqada wada sheekaysigayaga fiidyaha?Xiriirinta xiriirka maamulka ayaa hoos ku yaal.
Sida loo sameeyo koox fiidiyoow ah oo ku wada sheekaysta WhatsApp
Cusboonaysiinta ugu dambeysay ee WhatsApp waxay keentaa sifo la wada sugayo: awoodda lagu abuuro wada sheekaysi maqal iyo muuqaal ah oo kooxeed.Sida loo bilaabo shirarka fiidiyowga ee WhatsApp ama wac dhowr qof hal mar, waxaan kuugu sheegi doonaa maqaalkeena.
Sida WhatsApp Groups u Wicitaana u shaqeeyaan
Iyadoo shaqadan aysan heli karin dhammaan isticmaalayaasha - si tartiib tartiib ah ayaa loogu furayaa gobollo kala duwan.Wicitaanada kooxda waxaa samayn kara oo kaliya kuwa rakibay nooca hadda ee WhatsApp.
Inta lagu jiro wicitaan maqal ah oo ah nooca cusub ee arjiga, waxaad ku martiqaadi kartaa qof kale shirkadda qofka kula hadlaya.Taasi waa, waxaa jiri doona saddex qof oo ku jiri doona sheekeysiga maqalka ah.
Wicitaanno fiidyow ah ayaa suurtagal ah inta u dhaxaysa ilaa afar xiriiriye, si aad laba qof oo kale ugu dari karto sheekeysiga.
Haddii aad u baahan tahay inaad shirka isugu geyso in ka badan afar qof, isticmaal barnaamijyo kale.Waxaan si faahfaahsan uga hadalnay adeegyada bilaashka ah ee ku sheekeysiga fiidiyowga maqaal gaar ah.
Waa maxay chat video
Isgaadhsiintu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa nolosha bulsho ee qof kasta.Laakiin maanta, iyada oo ay ugu wacan tahay horumarinta tignoolajiyada, waxaa suurtagal ah in aad kala hadasho interlocutor mawduucyada xiisaha ee internetka.Sheekada fiidyaha, kuwaas oo si degdeg ah caan u helaya, ayaa kaa caawin doona in tan la fuliyo.
Maxay yihiin?Kani waa sheeko muuqaal ah oo taageerta dib u daawashada macluumaadka muuqaalka iyo maqalka ee xidhiidhka internetka.Gaar ahaanteeda waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in in ka badan laba qof oo is dhexgal ahi ay ku wada xidhiidhi karaan.Si aad u bilowdo ku sheekeysiga fiidyowga ah, waxa kaliya oo aad u baahan tahay in aad haysato kumbiyuutar leh xiriir internet, flash-player shaqaynaya, kamarad webcam, makarafoon iyo sameecado.
Isgaadhsiinta iyada oo loo marayo wada-sheekeysiga fiidiyooga ah ayaa ah mid aan sinaba uga hooseynin wada sheekeysiga nolosha caadiga ah, maadaama jawiga dhabta ah uu taageerayo xiriir muuqaal ah. Chat roulette ayaa si gaar ah loogu baahan yahay dhalinyarada, taasoo kuu ogolaaneysa inaad ku raaxaysato oo aad saaxiibo cusub ka hesho meelo kala duwan oo adduunka ah. Nidaamka goobta waxaa loo qaabeeyey si ka hor intaadan bilaabin doorashada interlocutor, waxaad geli kartaa xuduudaha la rabo, tusaale ahaan, da'da ama waddanka aad degan tahay. Faa'iidada ugu weyn ee isgaadhsiinta internetka ayaa ah in ay keento shucuur badan oo aan caadi ahayn iyo adrenaline degdeg ah qofka, taas oo suurtogal u ah in ay noqoto mid xaddidan, xitaa dadka dhibaatooyinka badan ee xishoodka nolosha dhabta ah. Si kale haddii loo dhigo, sheekeysiga fiidiyoogu wuxuu diyaar u yahay inuu qof walba siiyo isgaarsiin fudud, kaas oo la joojin karo wakhti kasta haddii koorsada wada hadalku uu joojiyo inuu kugu habboon yahay.
Haddii aad aaminsan tahay tirakoobka, ka dibna lamaanayaal badan oo ninkeeda iyo naagtiisa ay yihiin muwaadiniin dalal kala duwan ayaa la sameeyay iyada oo ay ugu wacan tahay isgaadhsiinta sheekeysiga fiidiyowga.Sidaa darteed, haddii aadan awoodin inaad hesho lammaane nafeed oo ku yaal deegaankaaga dhow muddo dheer, ama aadan si fudud uga helin dareenka ku filan jinsiga ka soo horjeeda, kaliya u gudub chat roulette.Halkaan waxaad hubaal ka heli doontaa qof aad la sheekaysato oo aad mustaqbalka qabanqaabiso kulan nolosha dhabta ah.
Sidoo kale, ha iloobin in sheekeysiga fiidiyowgu uu noqon doono xal aad u wanaagsan dadka raba inay bartaan luqad shisheeye.Ka dib oo dhan, xitaa haddii aad u fiirsato aasaaska aragtida maalin kasta, ma awoodi doontid inaad gaarto natiijada la rabo adigoon ku dhaqmin.Sheekada Fiidiyowga ah waa kheyraad isku xira malaayiin qof oo ka kala yimid dalal kala duwan.Sidaa darteed, waxaad isku dari kartaa isgaarsiinta wanaagsan iyo dhaqanka luqadda ee lagama maarmaanka ah.
Kooxaha Microsoft waxay heli doonaan dhamaadka-ilaa-dhamaadka sirta ah bisha Luulyo
Bishii Maarso ee sanadkan, Microsoft waxa ay ballan qaaday in ay shirkaddeeda Microsoft Teams ka siin doonto taageerada sirta dhammaadka-dhamaadka mustaqbalka dhow.Shirkadda ayaa dhawaan ku dhawaaqday in soo saarista muuqaalkan uu bilaaban doono horraanta Luulyo.Waxay qaadan doontaa ilaa laba toddobaad in si buuxda loo dhexgeliyo.
Dhammaadka-ilaa-dhamaadka sirta ah waa qarinta macluumaadka halka ay ka imanayso iyo fur-furid ujeeddadii loogu talagalay iyada oo aan suurtagal ahayn in la furo noodhka dhexe.Kooxaha Microsoft waxay isticmaali doonaan sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka (E2EE) wicitaanada xayaysiiska 2-koox ee VoIP, taasoo u ogolaanaysa isticmaalayaasha inay si amaan ah u gudbiyaan macluumaadka xasaasiga ah sida ereyada sirta ah.
Marka loo eego portal-kaMSPoweruser, sifadan waxa awood u siin kara maamulayaasha labada isticmaale ee gaarka ah iyo ururka oo dhan.Isticmaalayaashu waxay markaa awood u siin karaan dhamaadka-ilaa-dhamaadka sirta iyagoo isticmaalaya ikhtiyaarka sirta wicitaanka dhamaadka-ilaa-dhamaadka ee hoos yimaada Settings -> Privacy.Duubista wacitaanka iyo qoraal-ku-qoris lama heli doono hadda.Wicitaannada E2EE waxay kaliya taageerayaan astaamaha aasaasiga ah sida maqalka, muuqaalka, wadaaga shaashadda, wada sheekaysiga, iyo astaamaha horumarsan lama heli doono.
Sirintu waxay shaqaynaysaa oo keliya haddii qofka soo wacaya iyo kan helaya telka ay awood u siiyeen E2EE goobahooda.Dhammaadka-ilaa-dhamaadka sirta ah waxa laga heli karaa desktop-ka iyo macaamiisha moobaylka, maaha nooca shabakada ee Kooxaha.
Snapchat ayaa lagu eedeeyay shil baabuur oo dhimasho sababay
Ka dib saddex sano oo isku dayo aan waxba tarayn oo lagu dacweeyay fariinta caanka ah ee Snapchat, waalidiinta dhallin-yarada lagu dilay shilalka baabuurta ayaa fursad u helaya inay cadaaladda hor keenaan adeegga lama taabtaanka ah.Waxay u muuqataa in "Qaybta 230" ee caanka ah oo aan leexleexad lahayn ee Xeerka Sharciga Maraykanka, kaas oo ka saaraya milkiilaha ilaha internetka mas'uuliyadda waxa isticmaalayaashu ku dhejiyaan, ay dillaaceen.
Waxaan xasuusin doonaa, May 2022 gudaha Walworth County, Wisconsin, saddex dhalinyaro ah ayaa ku dhintay shil baabuur, iyagoo isku duubaya Snapchat. Sida laga soo xigtay waalidiinta mid ka mid ah dhibbanayaasha, darawalku wuxuu ku dardaray 123 mph si uu u qabto xawaaraha ugu sarreeya isagoo isticmaalaya Snapchat oo uu la wadaago guusha shakiga leh macaamiisha. Waxay aaminsan yihiin in dhalinyaradu aysan samayn doonin wax nacas ah haddii aysan ahayn ficillada adeegga internetka.
Xaqiiqdu waxay tahay in Snapchat kuu ogolaanaya inaad isticmaasho filtarrada kala duwan online, oo ay ku jiraan, ka mid ah hawlaha caanka ah, waxaa jira awood u leh inay toogtaan video la "filterka xawaaraha". Si tan loo sameeyo, barnaamijku wuxuu raadraacaa booska aaladda isagoo isticmaalaya dareemayaasha GPS wuxuuna soo bandhigayaa qiimaha xawaaraha fiidiyowga. Waalidiintu waxay aaminsan yihiin in adeegga fiidiyoogu uu mas'uul ka yahay wixii dhacay sababtoo ah xaqiiqda ah in ay sii daayaan qalabkan oo kale, taas oo macnaheedu yahay in ay ku dhiirigeliso dadka isticmaala inay sameeyaan waxyaabo quus ah iyagoo maqan.
Isku daygii ugu horeeyay ee lagu doonayay in ugu yaraan wakiilada Snapchat la keeno maxkamada waa lagu guul daraystay. Waxay soo baxday in shirkadaha tiknoolajiyada noocan oo kale ah ay hoos yimaadaan ilaalinta "Qaybta 230" oo gebi ahaanba laga dhaafo mas'uuliyadda falalka isticmaalayaasha gudaha adeegga. Dhib malaha haddii ay daabacday waxyaabo aan habboonayn ama ay adeegga u adeegsanayso ujeeddooyin madadaalo xaalad khatar ah - sida kiiskan oo kale. Sidaa darteed, Maxkamadda Racfaanka ee Maraykanka ee Wareegta Sagaalaad waxay si fudud u laashay codsiga oo ay laashay dacwadda iyada oo aan wax maxkamad ah la soo taagin.
Ka dib dhowr sano oo isku day ah oo aan waxtar lahayn si loo dhaafo "Qaybta 230" ee caanka ah, dacwoodayaashu waxay isku dayeen inay ka tagaan dhinaca kale - haddii la aaminsan yahay in Snapchat ay ku hawlan tahay dadka isticmaala inay sameeyaan wax kasta oo khatar ah oo aan la aqbali karin, markaa kiiska waxaa lagu guuleysan karaa maxkamadda. . Adeeggu waxaa laga yaabaa inuusan mas'uul ka ahayn ficillada isticmaalayaasha, laakiin waxaa jiri doona ciqaab loogu talagalay dhiirigelinta ficil kasta.
Dabcan, xaaladdu waxay gaadhay heer aan caqli-gal ahayn - sharcigu wuxuu jiray tan iyo 1996, sidaas darteed, suurtagal maaha in la tixgeliyo ficilkeeda si sax ah hadda, si fudud loo dhigo.Isla markaana, dib-u-dhacyo xafiiseed ayaa jira, maxkamaduhuna wax toos ah uma qaban karaan kiisaskan oo kale.Xaaladdan ayaa durba dhalisay guux ballaaran oo bulshada dhexdeeda ah, Garsooraha Maxkamadda Sare ee Mareykanka Clarence Thomas ayaa xiiseynaya kiiska murugsan - tani waxay la macno tahay in ay jirto fursad kasta oo loogu adeegayo Snapchat iyada oo amar maxkamadeed iyo xitaa lagu guuleysto kiiska iyada oo loo eegayo kuwa dhaawacmay. xaflad.Waxaa intaa dheer, guul laga gaaro hal kiis ayaa laga yaabaa in ay furto rajada lagu horkeeni karo cadaaladda ururada kale ee horey uga dhuuntay mas'uuliyadda oo sii wada shaqada lidka ku ah shuruucda anshaxa.
Kooxaha Microsoft waxay heli doonaan sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka iyo horumarinta awoodaha soo bandhigida
Microsoft waxa ay sii waddaa horumarinta madalkeeda Microsoft Teams-ka shirkadda waxana ay dhawaan ku dari doontaa dhawr astaamood oo cusub.Marka hore, dhamaadka-ilaa-dhamaadka sirta ah ayaa ugu dambeyntii ka soo muuqan doona goobta, marka labaadna, shirkadu waxay kala duwanaan doontaa goobaha iyo awoodaha shirarka fiidiyowga.
Nooca beta ee dhamaadka-ilaa-dhamaadka sifada sirta ah ee kooxaha Microsoft waxa ay u soo bixi doontaa qaybta hore ee sanadkan isticmaalayaasha ganacsiga ee goobta.Waxay diyaar u noqon doontaa wicitaanno aan qorshaysnayn oo ay weheliyaan laba ka qaybgalayaal.Mustaqbalka, waxaa la qorsheeyay in la soo bandhigo sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka shirarka fiidyaha ee la qorsheeyay oo ay ka qaybqaataan tiro badan.
Kooxaha Microsoft hadda ma taageeraan sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka ee wicitaanada fiidyaha. Xogta waxa lagu sir ah meel dhex marta iyo halka lagu kaydinayo, taas oo suurtogal ka dhigaysa in ay suurtogal tahay in adeegyada la oggol yahay ay galaan iyaga oo furfuraya. Shirkaddu waxay isticmaashaa sirta SharePoint si ay u ilaaliso xogta la kaydiyay, iyo sirta OneNote waxa loo isticmaalaa qoraalada lagu kaydiyo Kooxaha Microsoft. Dhammaan macluumaadka ku jira sidoo kale waa la sir ah inta lagu jiro gudbinta iyo kaydinta. Kooxda Microsoft ee tartanka ugu weyn, Slack, ayaa sidoo kale ka maqan sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka. Adeegga Zoom-na waxa uu bilaabay isku dhafka farsamada bishii Oktoobar ee sannadkii hore.
Saddex qaab oo cusub ayaa sidoo kale ka soo muuqan doona goobaha shirarka fiidyaha ee Kooxaha Microsoft.Habka weriyaha ayaa u oggolaanaya in macluumaadka dhijitaalka ah lagu dhejiyo wejiga ku xiga wejiga hadalka si ay u noqoto calaamad muuqaal ah oo kormeeraha.Hab la mid ah ayaa loo adeegsadaa tebinta wararka telefishanka.
Qaabka taagan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wejigaaga dul saarto nuxurka la soo bandhigay, kaas oo ku yaal aagga shaashadda oo dhan.Habka saddexaad ee dhinac-dhinac ah wuxuu dhigayaa wejiga afhayeenka oo ku xiga waxa la soo bandhigayo.Qaabka taagan ayaa imanaya kooxaha Microsoft dabayaaqada bishan, iyadoo labada nooc ee kale ay imanayaan hadhow.
Microsoft sidoo kale waxay soo saartay furaha PowerPoint Live ee Kooxaha maanta.Waxay u fududayn doontaa bandhigyada PowerPoint ee soo-jeediyaha iyo ka-qaybgalayaasha kale ee shirka labadaba.
Soo-bandhigayaashu hadda waxay ka arki karaan sheekeysiga, qoraallada iyo sawirada hal daaqad, iyo ka qaybgalayaasha kale ee kulanka waxay si madaxbannaan u eegi karaan boggaga la soo bandhigay.
Milkiilaha Tinder wuxuu ku iibsadaa horumarinta adeegyada fiidyowga Kuuriya Hyperconnect $ 1.7 bilyan
Match Group, oo iska leh Tinder, ayaa ku dhawaaqday inay iibsatay shirkadda adeegga muuqaalka Kuuriya ee Hyperconnect.Heshiiska ayaa gaaray $1.7 bilyan.Tani waa iibsiga ugu weyn ee taariikhda Kooxda Match.
Horumariyaha Kuuriya wuxuu leeyahay laba apps oo waaweyn: Azar waxaa loogu talagalay ku sheekeysiga maqalka iyo muuqaalka, iyo Hakuna Live waxaa loogu talagalay qulqulka khadka.Shirkadda Kuuriya ayaa faa'iido leh, iyadoo dakhliga 2022 uu gaaray $ 200 milyan, ayuu yiri Match Group.Tani waxay 50% ka badan tahay sanad ka hor.Adeegyada ayaa si gaar ah caan uga ah suuqa Aasiya, sidaa darteed, 75% dakhligu wuxuu ka yimaadaa dadka deggan Aasiya.
Hyperconnect waxay sidoo kale caan ku tahay naqshadaheeda cusub.Shirkadu waxay samaysay waxa ay ugu yeedho "nooca mobaylka kowaad" ee WebRTC.Waxaa loogu talagalay isku xirka tooska ah ee isku fac ee isticmaalayaasha mobilada iyada oo aan la isticmaalin server-yada.Tani waxay wanaajisaa amniga isticmaalaha waxayna yaraynaysaa kor u kaca horumariyaha.
Farsamada kale ee shirkadda Kuuriya ayaa u sahlaysa wakiillada kooxaha luqadaha kala duwan inay wada xiriiraan.Waxay u ogolaataa wada-hawlgalayaasha inay wada hadlaan oo ay wax u qoraan iyagoo isticmaalaya turjumaada wakhtiga dhabta ah.Sifadan waxa loo isticmaalaa adeega Azar.
Ujeedooyinka ay Kooxda Match Group heshay Hyperconnect lama cayimin.Weriyeyaasha Techcrunch waxay qiyaasayaan in shirkaddu ay ku dari karto tignoolajiyada Tinder iyo adeegyada kale ee shukaansi mustaqbalka.Xiritaanka heshiiska ayaa la filayaa rubuci labaad ee 2022.
Zoom waxaa lagu helay dambi ah inay leexisay tirakoobka isticmaalayaasha firfircoon
Adeegga wicitaanka fiidiyowga ee Zoom ma laha 300 milyan isticmaaleyaasha firfircoon ee maalinlaha ah ee ay shirkaddu hore u shaacisay.Adeeg bixiyaha ayaa qiray xaqiiqadan ka dib markii portal-ka Verge uu dareenka u soo jeediyay bayaanka rasmiga ah ee hore loo daabacay ee uu tafatiray.
Bayaanka asalka ah ee Zoom ayaa lagu yiri... "in ka badan 300 milyan isticmaalayaasha maalinlaha ah."iyo."In ka badan 300 milyan oo qof oo adduunka ah ayaa adeegsada Zoom waqtigan adag" ...Maalin ka dib, farriinta waa la tafatiray.Hadda waxa akhriya"300 oo Milyan Xubnaha Shirarka Fiidiyowga Soo Dhaweeya. "
Sida Verge tilmaamay, waxaa jira farqi aad u weyn marka loo eego isticmaale firfircoonida maalinlaha ah iyo ka qaybqaataha sheekaysiga fiidiyowga.Xaaladda labaad, isla qofkaas ayaa la tirin karaa dhowr jeer: haddii aad abaabushay shan kulan oo isgaarsiineed inta lagu jiro maalinta, waxaa lagugu xisaabin doonaa shan isticmaale."Isticmaal Maalin kasta Firfircoon" waxa la tiriyaa hal mar maalintii.Waxay ku taal tusahan in caannimada adeeg gaar ah inta badan la xisaabiyo.Haddii kale, dhagaystayaasha madalku waxay u ekaan doonaan kuwo aad uga weyn sida dhabta ah.
Zoom waxa ay tafatirtay fariinta marin habaabinta ah Abriil 24, maalin uun ka dib daabacaadda, taas oo, dabcan, u suurtagashay in ay ku faafto dhammaan cinwaannada daabacaadda khadka tooska ah.Ka dib markii The Verge ku soo dhawaaday Zoom, shirkaddu isla markiiba waxay qiratay khaladka.
"Waan ku faraxsanahay inaan caawino in ka badan 300 milyan oo kaqeybgale wicitaan fiidiyow maalinle ah inay ku xirnaadaan inta lagu jiro cudurka.Qoraal ku soo baxay blog-kayaga Abriil 22-keedii, waxaanu si badheedh la'aan ah ugu yeernay xubnaha inay yihiin "isticmaal".Ka dib markii aan ogaanay qaladka, waxaan tafatirnay fariinta "xubnaha".Tani waxay ahayd kormeer dhab ah oo dhankayaga ah,"Zoom ayaa ka jawaabtay rafcaankii Verge.
Daabacaada internetka ayaa xustay in inkasta oo shirkadu aysan wali bixin xogta tirada isticmaaleyaasha maalinlaha ah, kobaca dhagaystayaasha Zoom runtii waa mid cajiib ah.Tan iyo bishii Disembar ee sannadkii hore, tirada maalinlaha ah ee ka qaybgalayaasha shir-fiidiyeedyada ayaa ka kordhay 10 milyan ilaa 300 milyan maanta.
Tartamayaasha ugu waaweyn ee Kooxaha Microsoft iyo Google Meet ayaa dib u dhacaya, laakiin sidoo kale waxay kordhinayaan tirada isticmaaleyaasha firfircoon.Dhagaystayaasha maalinlaha ah ee wada sheekaysiga fiidyaha ee Microsoft ee bisha ayaa ka kordhay 70 ilaa 75 milyan oo qof.Bishan, shirkadu waxay duubtay 200 milyan oo ka qaybgalayaasha shir-fiidiyeedyada maalintii.
Tirada ka qaybgalayaasha wicitaanka fiidyaha ee kulanka Google ayaa koraya ilaa 3 milyan maalin kasta si ay u gaadhaan 100 milyan. Codsiga iskaashiga Webex ee Cisco waxaa horay u isticmaalay 300 milyan oo qof.Tirada diiwaangelinta maalintiiba waxay ku dhowdahay 240,000. Laakiin shirkadu wali ma bixiso tilmaamayaasha isticmaalayaasha firfircoon ee maalinlaha ah iyo tirada ka qaybgalayaasha shirarka fiidiyowga.
Google, Microsoft, Facebook ayaa wali ku jira doorka la-qabsiga waxayna isku dayayaan inay soo jiitaan isticmaaleyaasha cusub oo leh fursado bilaash ah.Tusaale ahaan, Google ayaa dhawaan adeegeeda kulanka ka dhigtay bilaash.